‘विवादित’ एसपी चन्द प्रहरी हेडक्वार्टरविरुद्ध अदालतमा, होला त सरुवा बदर? | Suvadin !
अदालतले माग्यो प्रहरी हेडक्वार्टरसँग लिखित जवाफ
प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) प्रकाश चन्द आफ्नै संगठन (नेपाल प्रहरीको हेडक्र्वाटर) विरुद्ध अदालतमा पुगेका छन्। निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएको अवस्थामा प्रहरी हेडक्वार्टरले आफ्नो सरुवा गरेको भन्दै कञ्चनपुरका एसपी चन्द उच्च अदालत दिपायल महेन्द्रनगर इजलाश पुगेका हुन्।
क्रमशः एसपी प्रकाश चन्द र आईजीपी प्रकाश अर्याल।
काठमाडाैं, असाेज ३१–प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) प्रकाश चन्द आफ्नै संगठन (नेपाल प्रहरीको हेडक्र्वाटर) विरुद्ध अदालतमा पुगेका छन्।
निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएको अवस्थामा प्रहरी हेडक्वार्टरले आफ्नो सरुवा गरेको भन्दै कञ्चनपुरका एसपी चन्द उच्च अदालत दिपायल महेन्द्रनगर इजलाश पुगेका हुन्।
गत साता मात्र प्रहरी हेडक्वार्टरले चन्दको प्रहरीको प्रदेश नम्बर ६ को कार्यालय सुर्खेतमा सुरुवा गरेको थियो। चन्दको ठाउँमा एसपी डिल्लीराज विष्टलाई पठाइएपछि चन्दले अन्तरिम अादेश जारीकाे माग गरेका हुन्।
निर्वाचन आयोगसँंग स्वीकृति लिएर विष्टलाई प्रहरी मुख्यालयले रमाना समेत दिइसकेको बेला एसपी चन्द सरुवा रोकिपाऊ भन्दै अदालत पुगे।
उनले प्रहरी हेडक्वार्टर र मानव स्रोत विकास प्रशासन उपशाखा काठमाडौंलाई विपक्षी बनाएका छन्। कञ्चनपुर सरुवा भएका एसपी विष्ट महेन्द्रनगर हाजिर हुने तयारीमा थिए ।
नेपाल प्रहरीमा सरुवाविरुद्ध अदालतमा पुगेको यो नै सम्भवतः पहिलो घटना मानिएको छ। नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता मनोज नेउपाने भन्छन्, ‘सरुवा संगठनको आन्तरिक विषय हो। तर, नौलो घटना भएको छ।
यसअघि शिक्षा मन्त्रालयले जिल्ला शिक्षा अधिकारीहरुको सरुवा गर्दा त्यसविरुद्ध अदालत जाने ‘रोग’ प्रहरी संगठनमा पनि सरेको चर्चा हुन थालेको छ।
किन कञ्चनपुरमै बस्न चाहान्छन् एसपी चन्द?
कञ्चनपुरमा ‘विवाद’ प्रहरी अधिकारीको रुपमा चर्चामा रहेका चन्द गत वर्ष जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरको प्रमुख भएर गएका थिए।
यो बीचमा कञ्चनपुरमा आधा दर्जन बढी हत्या घटना भएपनि उनी ति घटनालाई किनारा लगाउन सफल हुन सकेका छैनन्। स्मरण रहोस् समाचार लेखेकै आधारमा पत्रकारलाई थुनामा राख्ने एसपी चन्द तिनै प्रहरी अधिकारी हुन्।
पढनुहोस् : जुन समाचारले पत्रकारद्वय भण्डारी र भट्ट् प्रहरी हिरासतमा पुगे!
अपराधिक क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न नसकेको तथा अन्य विषयमा पनि विवादमा आउने गरेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको थियो।
प्रहरी हेडक्वार्टर स्रोतका अनुसार एसपी चन्दको कार्यक्षमता कमजोर भएको, आर्थिक रुपमा समेत विवादमा आएको भन्दै हेडक्र्वाटरले उनको सरुवा गरेको हो ।
एसपी चन्दको अबको तीन महिनापछि ३० वर्षे सेवाअवधि सकिँदैैछ।
तर, अबको तीन महिनाभित्र चुनाव हुने भएकाले एसपी चन्द जिल्लाको कमाण्ड सम्हाल्न चाहान्छन्।
उच्च अदालत दिपालय, महेन्द्रनगर इजलाशले प्रहरी हेडक्वार्टरसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ।
न्याायाधीश वीरेन्द्रकुमार कर्णको एकल इजलाशले ‘निवेदकको माग (एसपी चन्द) अनुसार अन्तरिम आदेश जारी गर्नु पर्ने हो, होइन? भन्दै १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न भनेको छ।
निवेदकको जिकिरको विषयमा दुबै पक्षलाई छलफल राखेर निष्कर्षमा पुग्न सजिलो हुने भन्दै अदालतले निर्णयको फाइल पनि मागेको छ।
उच्च अदालत दिपायल, महेन्द्रनगर इजलाशका रजिष्ट्रार तीर्थराज भट्टका अनुसार अदालतले चन्दलाई कात्तिक ७ गतेसम्म कञ्चनपुरबाट रमाना नदिनु (अर्थात कञ्चनपुरमा कायम राख्नु) भनेको छ।
नेपालको संविधानले ‘संविधानसँग बाझिएका विषयबस्तु बाहेक’ अन्य रिट उच्च अदालतमा पनि दायर गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ।